Manomboha faran'ny herinandro - Manova ny tanàna eran'izao tontolo izao indray mandeha. Martech Zone
Tamin'ity faran'ny herinandro ity dia olona 125 avy amin'ny firenena maherin'ny 30 no nandany andro vitsivitsy nifanakalo hevitra momba ny fomba mety hisy fiatraikany tsara amin'ny toekarena manerantany ny Startup Weekend. Toa adala ve? Ny Foundation Kauffman dia vonona ny hiloka 400,000 $ fa tsy isika. Nanolotra fanampiana telo taona izy ireo izay namela ny ekipa StartUp Weekend hanitatra ho an'ny mpiasa 8 manontolo andro.
Ity ekipa kely ity dia hanome fanampiana ho an'ny hetsika StartUp Weekend an-jatony erak'izao tontolo izao. Ahoana? Izany no anton'ilay fihaonana an-tampony tany Kansas City tamin'ny faran'ny herinandro. Ny vondrona dia fifangaroan'ny junkies manomboka amin'ny faran'ny herinandro sy ny rookies, izay samy nanolo-tena ho mpikarakara hetsika na mpikarakara ny digest digest ao amin'ny fiarahamonin'izy ireo.
Amin'ny maha mpikarakara eo an-toerana ahy dia nanana fotoana nifanakalozana hevitra tamin'ireo namako aho avy amin'ny toerana toa an'i Singapore, Prague, Spain, Japan, Canada, ary Austraila. Na eo aza ny fahasamihafana eo amin'ny taona sy ny kolontsaina, ny lohahevitra nampitambatra dia mazava fa filan'ny nofo matetika amin'ny fanitarana ny vondron'olona mpandraharaha manerantany. Isika tsirairay dia mino fa eo no hisy ny tena famoronana asa amin'ny taona ho avy.
Iray amin'ireo tantara nahagaga indrindra ny famerenana ny faran'ny herinandro iraisan'ny StartUp iraisan'ny Israeliana / Palestiniana voalohany. Na eo aza ny lisitr'ireo sakana mampivadi-po sy olana lehibe momba ny fandriam-pahalemana maherin'ny 100 israeliana sy 30 no nandany 54 ora niaraka. Tsy ny resaka no resahina politika, teo ho eo izy ireo teknolojia.
Miaraka amin'ny famatsiam-bola vaovao avy amin'ny Kauffman Foundation, StartUp Weekend dia afaka manitatra ny iraka entiny mitondra ny eduction Experiential ho an'ireo mpandraharaha. Na dia mipoitra aza ny tena orinasa amin'ny faran'ny herinandro, ny Start Up Weekend dia tsy orinasa StartUp, orinasa mpandraharaha izy io. Ary mila mpandraharaha bebe kokoa isika.
Faly aho amin'ireo zavatra mety hitranga eran'izao tontolo izao ary manantena ny hiverina any Kansas City aho isan-taona manomboka izao, hifandray indray amin'ny namana, ary hihaona amin'ny olona an-jatony hafa, satria ny hetsika dia mitombo hatramin'ny 100 ka hatramin'ny 1,000. Mandra-pahatongan'izany dia mifantoka amin'ny StartUp eto Indiana aho. Te hianatra bebe kokoa? Mandeha: http://www.startupweekend.org ary http://www.indianapolis.startupweekend.org
Tags: fampandrosoanany fandraharahanaIndianaIndianapolisfampandrosoana ny vokatrafaran'ny herinandro fanombohana
B2B: Misy fiantraikany amin'ny fanapahan-kevitra momba ny fividianana vidéo ny horonan-tsary